Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 03
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 03
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 03
Johane Mubapatidzi ndiye mukuri wenzira yaJesu.
Mamiriro ezvinhu pakati pevakuru vemuzvitendero zvemaJuda paKuuya kweKutanga kwaJesu aive akafanana kwazvo nemamiriro ezvinhu pakati pevaKristu vakaponeswa paKuuya kweChipiri kwaJesu.
Saka Ruka akataura zvinhu zvinoitika muhupenyu hwevanhu zvakatarisana naJohane Mubapatidzi, sezvo zvichaitikawo mumazuva edu.
RUKA 3:7 Naizvozvo wakati (Iye Johane Mubapatidzi) kuvazhinji vaivuya kuzobapatidzwa naye: Imi vana venyoka, ndiyeniko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
Johane akagarisa pasi vakuru vezvitendero vechiJuda. Akavadaidza kuti vana vemhuka yakazoshandurwa kuita nyoka, vana venyoka dzine hukasha. Idzi inyoka dzine chefu mumiromo yadzo. Chefu ndizvo chero zvinotendwa nevanhu zvinorwisa Magwaro. Havadi Mwari, vanongotya gehena. Zvinoonekwa muhupenyu hwavo apo vasina zvibereko zvekutendevuka. Vaifunga kuti vakachengetedzeka nekuti vakabva kuna Abrahama. Ichi chiratidzo chekusaziva kukuru. Johane akavayambira kuti Mwari aizoramba vanodiwa kwazvo achimutsa vakaoma moyo avo vasina chero munhu anovapa mukana wekuti vagogona kuenda Kudenga. Tine kuita kwakafanana neuku nhasi. MaKristu akaponeswa anonzwa akachengetedzeka mukati memakereke avo, kunyange kuine zviuru zvemarudzi akasiyana emasangano emakereke zvinopikisana nekurwisana.
Ruka anotaura pamusoro paJohane achiti paanoshanda nevanhu, Mwari anoramba vane mbiri neavo vanofunga kuti vakakosha kukunda vamwe. Anobva amutsa vaya vasina kana tariro yekukunda uye vanorambwa vachinzi vakundikani. (Muenzaniso mukuru kwaive kukunda kwaTrump airambwa aive asina kutarisirwa nevazhinji uye kukundwa kwakaoma kweuyo aidiwa kwazvo aitarisirwa Hillary Clinton musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica muna 2016. Izvi hazviiti kuti Trump ave munhu akanaka. Mwari anoshandisa vane moyo yakaoma kana achifanira kudaro.)
RUKA 3:8 Naizvozvo berekai zvibereko zvakafanira kutendevuka, musatanga kureva mumoyo menyu: muchiti Abrahama ndibaba vedu; nokuti ndinoti kwamuri: Mwari ungamutsira Abrahama vana pamabwe awa.
RUKA 3:9 Zvino sanhu ratomutswa pamudzi wemiti; naizvozvo muti mumwe nomumwe usingabereki chibereko chakanaka, unotemwa ukakandirwa mumoto.
Kana tisingakwanisi kusvika pahwaro hunodiwa naMwari, kunyangwe tiri maKristu akaponeswa tinozopinda munguva yeKutambudzika kukuru. MaKristu akaponeswa, vanozvifadza uye vanozvikudza vanonzwa moyo yavo ichiti vachadanwa naMwari zvisinei nekusaziva kwavo kukuru Magwaro, vachaguma vasiiwa munguva yeKutambudzika kukuru, apo Mwari achazvuzvurudza vakarambwa vakawanda vachipinda muhurongwa hwake hweruponeso.
MATEO 17:11 Akapindura akati: Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose.
Izvi zvakanyorwa zviri muzvinhu zvinozouya. Johane Mubapatidzi akanga auya saEria, asi Johane aive afa kare pakataurwa izvi naJesu. Johane haana zvaakavandudza chero chinhu. Akapindura murairo nekuunza rubapatidzo rwemvura uye kuzivisa Mesiasi. Nhasi uno maKristu anoponeswa obva abatwa muzvitendero zvakasiyana-siyana zvinorwisana. Tinoda mumwe munhu anotivandudza kuti tidzokere pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva. Kana tikasadaro, kunyangwe tikaponeswa kubva kumoto wegehena, tinozokandirwa chete mumoto wenguva yeKutambudzika kukuru.
Saka isu maKristu takagadzirira zvakadii Kuuya kweChipiri kwaJesu Kristu? Mwari anoda kuti tivandudzwe tidzokere pakutenda kwekereke yekutanga yeTestamente itsva. Tafamba zvakadii tiri mugwara iroro? Vanhu havachatsigiri kutenda kwavo neMawaro zvachose. Kusaziva Magwaro kwava pachidanho chakaipisisa chinotyisa. Chero vanhu vakaponeswa vachipinda imwechete yemakereke 30 000 akasiyana aripo, vanonzwa vari vepamusoro- soro uye vakachengetedzeka pavanotevedzera zvinotaurwa nevakuru vemakereke avo. Zvibereko zvekuziva Bhaibheri Shoko raMwari hazvisisipo zvachose muvanhu. Kusaziva kwedu kuri kuvigwa mukuzvikudza kwedu kwanyanyisa. Takaponeswa kare saka tinobva tafunga kuti hazvina maturo kuti tizive kuti Bhaibheri rinoti kudii. Pamusoro pazvose, tinoenda kumasangano edu akasarudzika zvakanyanya, uye vakuru vemakereke edu kana kuti vafundisi vanodzidza Bhaibheri. Saka tinozviudza kuti takachengetedzeka zvisinei nekuziva zvinhu zvishomanana pane zvakanyorwa muBhaibheri. Asi nguva yeKutambudzika kukuru iri kuuya, saka tinofanira kuziva kuti chii chiri kuitika kuti tipunyuke kwairi.
Kuzivisa Kristu semunhu, Ruka akataura yambiro yakapihwa vanhu naJohane Mubapatidzi.
RUKA 3:10 Vanhu vazhinji, vakamubvunzava, vachiti: Zvino todiniko?
11 Akapindura, akati kwavari: unonguvo mbiri ngaagovane nousina; nounezvokudya ngaaite saizvozvo. (Kupa)
12 NavaTeresi (vanotora mari yemutero) vakavuya vo, kuzobapatidzwa; vakati kwaari: Mudzidzisi Todiniko?
13 Akati kwavari: Musareva mari kupfuvura pamakarairwa napo. (Musava nemakaro kana kunyengera pamusoro pemari)
14 Navarwi vo, vakamubvunza vachiti: Nesuvo todiniko? Akati kwavari: Musatorera munhu chinhu nesimba, kana kupomera munhu nhema; mutende nomubairo wenyu.
(Musava noutsinye. Ivai makasimba asi muchibata zvakafanira, mufare kuti mune basa uye musareva mari zhinji yemuripo.)
Ruka akatarisa zvinhu zvinobata munhu, uye anoona pakanetera isu vanhu zvakanyanya kunova kuzvifunga uye makaro. Mibvunzo yemaJuda yese yaive nemari uye pfuma mukati. Ndicho chinhu chiri kukosheswa nemaKristu nhasi uno. Ruka akabva ataura mushonga waJohane. Ipai kuvarombo. Ivai nehupenyu hwakareruka kuti muhoro wenyu ukukwanirei. Kana muine zvinzvimbo muruzhinji ivai nemoyo murefu uye mubate zvakafanira pamabasa enyu. Muripo kubatsira kwete kudzvanyirira vanhu, uyezve kwete kuti muzviunganidzire pfuma.
RUKA 3:19 Asi Herode mubati, akati arairwa naye pamusoro paHerodiasi, mukadzi womunun’una wake, nezvakaipa zvaakanga aita iye Herode,
20 Wakawedzera pamusoro pazvose chinhu ichi, kuti wakapfigira Johane mutorongo.
Kuroora nekurambana inyaya nhasi uno, uye yakagara iri nyaya inonetsa muvanhu.
MARAKI 2:16 Nokuti ndinovenga kurambana- ndizvo zvinotaura JEHOVA, Mwari waIsraeri- vuye munhu unofukidza nguvo yake nokumanikidza- ndizvo zvinotaura Jehova.
“Kurambana” zvinoreva kuti kuparadzana kwemurume nomukadzi.
MATEO 19:6 Nokudaro havachiri vaviri, asi nyama imwe. Zvino izvo Mwari zvaakasonganisa, munhu ngaarege kuzviparadzanisa.
Hakuna munhu anotenderwa kurambanisa murume nomukadzi vakaroorana. Chitsidzo chewanano chinoti kusvika rufu rwatiparadzanisa.
Saka hakuna munhu anokwanisa kuramba umwe wake oroora mumwe munhu waarambana naye achiri mupenyu, nekuti chitsidzo chiripo kusvika murufu.
MARKO 10:11 Akati kwavari: aninani unorasha mukadzi wake, akawana mumwe, unoita vupombwe kwaari.
MARKO 10:12 Vuye kana iye mukadzi akarasha murume wake, akawanikwa nomumwe, unofeva.
Saka kurambana nekurora kana kuroorwazve zvakaipa.
Asi mukadzi anofanira kuva ari mhandara paanoroorwa. Kana akarara nemurume asati aroorwa, akasareurura kumurume ari kuda kumuroora, ipapo chitsidzo kana sungano yewanano yake ndeyekunyepa uye haimusunganidzi nemurume waanenge achiroorana naye. Paanoziva mamiriro emukadzi uyu, kana achida hake, anokwanisa kubva amusiya ipapo iye anenge asununguka kuroora mumwe mukadzi anenge ari mhandara sezvo “chitsidzo” chemuchato iwowo chinenge chisina kusungwa- chaive chitsidzo chenhema. Izvi hazvifanani nehupombwe nekuti vaive varoorana zviri pamurairo saka chitsidzo chewanano yakadaro chinenge chiri chekusvikira vaparadzaniswa nerufu. Chitsidzo chewanano chinoramba chiripo “zvichinaka kana zvichirwadza”. Saka hupombwe zvinoreva kusavimbika kune umwe wako chinova chimiro “chakaipa”. Asi izvi hazviguri chitsidzo chewanano. Chitsidzo chewanano chinoramba chakasungwa zvisinei nekusavimbika kweumwe anenge ari muwanano. Saka hakuna munhu anogona kuramba mumwe owanana nemumwe nekuda kwehupombwe.
MATEO 5:32 Asi ini ndinoti kwamuri: mumwe nomumwe unorasha mukadzi wake, asi nemhosva yovupombwe (kuita zvebonde asati awanikwa), unomuitisa vupombwe, aninani unowana arashwa, unoita vupombwe.
Mambo Herode vakaita kuti mukadzi wemukoma wavo arambe mukoma wavo, vachibva vamuwana ivo. Chiitiko chekurambana nekuroorana zve chakazara. Johane Mubapatidzi araira Herode, achibva avharirwa mutorongo nekuda kwekushinga kuparidza chokwadi ichi.
Nei Ruka akataura pamusoro penyaya iyi? Nekuti kurambana nekuroora zve yaizova nyaya huru panguva yekuuya kwechipiri kwaJesu. Makereke parizvino ave kunzwira kuita uku, vave kutendera kurambana nekuroorana zve.
Vanhu vakaroorana vanorambana kana vachida, asi vanofanira kurarama vose vasiri muwanano.
Varume nevakadzi vane kuita kukuru kusingagumi kwekuputsa hwaro hwaMwari panyaya yewanano.
Nelson Rockefeller muna 1962 akaramba mukadzi wake akaroorazve muna 1963. chiitiko ichi chakamunzvenga chikasafadza vakadzi vazhinji vakawanikwa, asi haana kuzokunda kuva nhengo yevaikwikwidza kuva mutungamiri wenyika zvisinei nekuedza kanokwana katatu. Vanhu vekuAmerica vakaramba vachiita kunge vakaona kuti wanano yaifanira kuva yehupenyu hwese.
Asi muna 1880 Ronald Reagan aive akaramba mukadzi akaroora umwe akakunda kuva mutungamiri wenyika.
Muna 2016 Donald Trump, akaroora katatu akaramba kaviri, akava mutungamiri wenyika. Kurambana nekuroorazve hachisisiri chinhu chinokosheswa nevanhu kuAmerica.
Dai Johane Mubapatidzi akaonekwa mumazuva edu ano kuti araire kuita kusingadiwi muBhaibheri uku kwave kutenderwa mumakereke edu, angadai akasungwa akakandwa mutorongo zvakare achipomerwa mhosva yezvechitendero.
Saka parizvino takanyura zvakanyanya mukutadza kunorambwa muMagwaro, asi tinofunga kuti Mwari haana basa nazvo. Asi anebasa nazvo.
RUKA 3:20 Wakawedzera pamusoro pazvose, chinhu ichi, kuti wakapfigira Johane mutorongo.
21 Vanhu vose vakati vabapatidzwa, naiye Jesu abaptidzwa vo, achinyengetera, denga rikazarurwa,
22 Mweya Mutsvene akaburukira pamusoro pake nomufananidzo wakaita sowenjiva, inzwi rikabva kudenga, richiti: Ndiwe Mwanakomana wangu anodikanwa; ndinokufarira.
Pano tinoona chimwe chinhu chikuru.
Ruka anotiudza chinhu chakadzama pamusoro paJohane Mubapatidzi nekuparidza kwake. Asi paakasvika pakukura kwehushumiri hwaJohane Mubapatidzi, kubapatidzwa kwaJesu, Ruka haana kutaura zita raJohane Mubapatidzi zvachose. Nei? Achienzaniswa naJesu, zita raJohane harikodzeri kutombotaurwa.
Asi Johane aive mumwe wemaprofita makuru kwazvo. Muprofita mutumwa akauya kuzozivisa Mesiasi.
Ruka haana kutaura zviitiko izvi negwara razvakaitika naro. Akataura pamusoro pekuiswa kwaJohane mutorongo sechikonzero chekuzorega kuzotaura nezvake. Ruka akabva adzokera kumashure pazviitiko zvenguva kurubapatidzo rwaJesu kwaasina kuzotaura zita raJohane.
Saka Ruka ari kutiudza kuti kudii? Sevanhu tine chiremerera nekuti Jesu akatifira asi hatina kukosha zvachose. Chero chinhu chataitira Mwari, aikwanisa kushandisa mabwe osiya vanhu kuti aite basa rimwechete iri kana achida hake. Saka hakuna munhu pakati pedu anofanira kunzwa akakosha kana kudakara nekuda kwekubatira Mwari.
MaKristu akawanda nhasi vanozviita kuti vave vanhu vanozvida uye vanoda kuyemurwa nevamwe.
Asi, kutarisa chokwadi kwaRuka kunoratidza kuti kana zvichienzaniswa naJesu hatirevi chinhu pamberi pake.
Vafudzi vakanzwa kuimba kwevatumwa vachirumbidza Mwari pakazvarwa Jesu vaive vasina kukosha zvachose kuti vataurwe nemazita avo. Pakabapatidzwa Jesu, muprofita mukuru uye munhu aive akakosha pamazuva ake, Johane Mubapatidzi haana kana kutaurwa nezita rake.
Pahuvepo hweMunhu Jesu, munhu wese anonyangarika kunge asipo.
Muzvikamu zvedu zvedzidzo zvemanhamba zvenguva yedu, kune manhamba vaviri, motsi (wekutanga) na zero (pasina).
Manhamba maviri aya ndiwo hwaro hwedzidzo yese iri pano panyika.
Jesu ndiye nhamba 1 (Wekutanga), vamwe vanhu vose kana vachienzaniswa vakafanana ne 0 (pasina).
Ruka anoda kuti uhu huve hwaro hwezivo yedu yose pamweya.
I VAKORINTE 15:31 ... , ndinofa zuva rimwe nerimwe.
Pauro, mupostora mukuru wenguva yekereke yekutanga aifa zuva nezuva kuti ave munhu pasina. Iyi ndiyo yaive kiyi yake yekubudirira.
Kana isu mazero tikapinda mumutsetse mumwe naJesu, iye ari pamberi seMusoro, zvino zero wega wega anowedzerwa anowedzerawo hukuru hwenhamba iyi. Semuenzaniso 1OOO OOO inhamba yakakura kukunda 100.
Hatifaniri kutora chiratidzo chechikara chinomiririrwa nechiverengo 666.
Zero ndicho chega chiverengo chisingagoni kuverengwa. Kuwedzera zero hakuiti kuti chero nhamba iswedere pakuva 666.
Saka sezvo mwedzi uchiratidzira zuva, tinofanirawo kuratidzira “Zvakanyorwa zvichinzi ...” muBhaibheri. Zvatinofunga isu hazvina maturo zvakafanana nazero. Asi zvakanyorwa muBhaibheri chete ndizvo zvinoverengwa senhamba 1.
Chiratidzo chechikara ndiko kusukurudzwa kwepfungwa dzevanhu nedzidziso dzakaitwa nevanhu uye tsika dzevanhu nezvavanofunga zvisina kunyorwa muBhaibheri.
Ruka anotaura rudzi rweropa raJesu, Munhu akarurama, achitangira pana Adamu aive munhu akarurama wekutanga.
Asi Adamu akatadza, zvakabva zvareva kuti Jesu semunhu akarurama, aisafanira chete kurarama akarurama iye pachake, asi aifanira kugadzirisa kutadza kwakaitwa naAdamu mumunda weEdeni, achibva atisunungurawo tese kubva muzvivi.
Jesu aive asiri Mwanakomana waJosefa. Maria akazviburitsa pachena kupfurikidza kuzoroorana naJosefa atova nemimba ine mwedzi mitatu. Josefa aive wemhuri yehushe yerudzi rwaDavidi sezvo aive abva kuna Soromoni, mwanakomana waDavidi wehumambo.
Asi mutsetse wehushe uyu wakazodamburwa nekuda kwekutadza kwamambo Jekonia (adaidzwawo kuti Konia).
JEREMIA 22:24 Novupenyu bwangu ndizvo zvinotaura JEHOVA, kunyange Konia mwanakomana waJehoiakimi, mambo waJuda, aive chindori chokutsikisa nacho, paruvoko rwangu rworudyi, kunyange zvakadaro ndaikubvisa po.
JEREMIA 22:28 Ko munhu uyu Konia mudziyo wakaputsika unozvidzwa here? Iye mudziyo usingafadzi munhu here? Vakadzingirweiko, iye navana vake, vakadzingirwa kunyika yavasingazivi?
JEREMIA 22:30 Zvanzi naJEHOVA: Nyora kuti munhu uyu haanavana, munhu usingazofari pamazuva ake; nokuti hakuchinomurume pakati pavana vake uchava nomufaro, uchagara pachigaro chovushe chaDavidi, achibata vushe bwaJuda.
Mwari akavimbisa kuti hapana pakati pevana vake achagara pachigaro chevushe. Saka Josefa aisakwanisa kuva Mambo sezvo aive mwana werudzi rwaJokonia.
Ruka akabata dambudziko iri pavanhu. Jesu angave sei mambo wemaJuda kana humambo hwamambo Soromoni hwakagurwa panaKonia? Izvi zvinomamikidza Ruka kuti aronde dzinza remadzitateguru aMaria kubva kuna Davidi achitora mwanakomana wake mukuru Natamu.
RUKA 3:23 Zvino iye Jesu wakanga anamakore anenge makumi matatu, nguva yaakatanga kudzidzisa, ari pakufunga kwavanhu, mwanakomana waJosefa, mwanakomana waHeri.
Heri aive baba vaMaria. Nekuti Josefa aive aroora Maria akatora Jesu semwanakomana wake, munhu wese aive achiti Jesu mwanakomana waJosefa.
RUKA 3:31 Mwanakomana waMerea, mwanakomana waMena, mwanakomana waMatata, mwanakomana waNatamu, mwanakomana waDavidi.
Dzinza iri raive rakasununguka kubva pakutukwa kwaJekonia sezvo vakasiyana nerudzi runobva nekunaSoromoni.
Josefa aizotora kurera Jesu semwanakomana wake. Izvi zvaiita kuti Jesu akwanise kuva Mambo (semwanakomana waJosefa wekurera) saka aive asiri pakutukwa kwaKonia sezvo aive aberekwa naMaria asiri mwanakomana waJosefa weropa. Mwanakomana wekurera ane kodzero dzese pakugarwa kwenhaka dzakangofanana nedzine mwanakomana wekubereka.
Ndicho chikonzero nei Maria aizotarisana nekutukwa kwese kwekuva nemimba asati aroorwa. Aifanira kuratidza kuti Jesu aive asiri mwanakomana waJosefa wekubereka. Aive mwanakomana waJosefa wekurera.